China Zvinonzwisisika mutengo China A36 Galvanized Steel Perforated Metal Sheet fekitari uye vagadziri |Zhanzhi
Perforated Steel Sheet chigadzirwa cheshizha chakabayiwa nemhando dzakasiyana-siyana dzegomba saizi uye mapatani inopa inoyevedza kukwezva.Iyo inopa kuchengetedza muhuremu, kupfuura kwechiedza, mvura, ruzha uye mhepo, uku ichipa yekushongedza kana yekushongedza maitiro.Perforated Steel Sheets akajairika mukati uye kunze dhizaini.
Tichitsigirwa nechikwata chepamusoro uye chehunyanzvi cheIT, tinogona kupa rutsigiro rwehunyanzvi pane pre-kutengesa & mushure-yekutengesa sevhisi yemutengo unonzwisisika China A36 Galvanized Steel Perforated Metal Sheet, Zvigadzirwa zvedu nemhinduro zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvakavimbika nevashandisi uye zvinogona kusangana nguva dzose. kushandura zvido zvehupfumi nemagariro evanhu.
Tichitsigirwa nechikwata chepamusoro uye chehunyanzvi cheIT, tinogona kupa rutsigiro rwehunyanzvi pane pre-kutengesa & mushure-yekutengesa sevhisi yeChina Perforated Steel Sheet, Perforated Metal Sheet, Isu tinonamatira kune yakatendeseka, inoshanda, inoshanda kuhwina-kuhwina kumhanya mishoni uye nevanhu. -oriented business philosophy.Hunhu hwakanakisa, mutengo unonzwisisika uye kugutsikana kwevatengi kunogara kuchiteverwa!Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ingoedza kutibata kuti uwane rumwe ruzivo!
Tinogona Kupa Yakagadzirirwa Punching Service
Kana iyo 60- kana 45-degree kana yakatwasuka-mutsara perforation pateni isinganyatso kuenderana neako nyanzvi yekushandisa, ingotizivisa!
ZZ Inogona Kushanda seYako Imwe-Source Perforated Round Hole Metal Mutengesi
ZZ Simbi inopa peforated simbi pepa mune yakajairwa 60-dhigirii yakadzika, 45-dhigirii yakadzedzereka uye yakatwasuka-mutsara mapatani.Iine sarudzo yakadzama, kutungamira kweanodzedzereka kazhinji kunopindirana nediki dimension yerata resimbi, nepo yakatwasuka-yegomba patani inowanzoenderana kune refu dimension.
Iwe unogona kuwana mapepa ane perforated esimbi akagadzirwa kubva kune yakakura assortment yemhando yepamusoro zvinhu, zvinosanganisira kabhoni simbi, Stainless simbi 304, galvanized simbi nealuminium.
Ndezvipi zvakanakira slotted galvanized metal plate perforated iron simbi ine maburi?
Sei mapeteni ane mapeche esimbi akatenderedzwa nemakomba achisarudzwa kazhinji pane masikweya kana maburi akaiswa?Nekuti ivo vanopa yakanakisa musanganiswa wekureruka kwekugadzira, yakaderera kugadzirisa, uye kugona.Iwe zvakare unowana yakasarudzika sarudzo yegeji, madhayamita, saizi yeshizha sarudzo uye sarudzo dzezvinhu, zvichiita kuti zvive nyore kuwana chakanakira chigadzirwa kune zvaunoda.Round gole perforated metal zvakare inogara kwenguva yakareba kupfuura mamwe marudzi, zvichiita kuti ive iyo inodhura-inoshanda imwe nzira mukufamba kwenguva.
Iwe Unogona Kushandisa Perforated Metal sheet kune Zvakawanda Zvinhu Zvakasiyana
Perforated steel sheet zvigadzirwa zvinogona kushandiswa kune akawanda anoshanda uye ekushongedza zvinangwa, zvinosanganisira:
* Kuparadzanisa ore kana dombo mumashandisirwo emigodhi
* Chengetedzo mumahwindo, magedhi, nemagonhi
*Kusefa kwemhepo kwemidziyo yemagetsi
* Kukuya zvinonhuwira, mhodzi uye zvimwe zvigadzirwa zvekudya
* Kuderedza ruzha mumainjini makuru
* Kuvandudza kutaridzika kwezvitoro zvezvitoro zvinoratidzira
* Zvigadzirwa zvemumba senge patio fenicha nemidziyo
* Mhando dzakasiyana dzemasikirini uye mavheti